အီကွေဒေါနိုင်ငံက တရုတ်နိုင်ငံ Sinovac COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ပထမအသုတ် လက်ခံရရှိ - Xinhua News Agency
အဆိုပါ ကာကွယ်ဆေးသည် မြို့တော် ကွီတိုရှိ Mariscal Sucre နိုင်ငံတကာ လေဆိပ်သို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး လေယာဉ်ဖြင့် ဧပြီ ၇ ရက်တွင် ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အရေးကြီးသောလေယာဉ်ခရီးစဥ်များအား ကြိုဆိုခြင်း သို့မဟုတ် ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြရန် လေကြောင်းတွင် အသုံးပြုသည့်ထုံးစံတစ်ခုဖြစ်သော ရေဖျန်းဂုဏ်ပြုခြင်းဖြင့် ၎င်းလေယာဉ်အား လေဆိပ်၌ ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုခဲ့သည်။
အီကွေဒေါနိုင်ငံ ကွီတိုမြို့ရှိ လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိလာသည့် တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Sinovac COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ပထမအသုတ် ရောက်ရှိမှုကြိုဆိုခြင်းအခမ်းအနား၌ အီကွေဒေါနိုင်ငံ သမ္မတ Lenin Moreno (ဝဲဘက်ဒုတိယ) နှင့် အီကွေဒေါနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Chen Guoyou (ယာဘက် ဒုတိယ) တို့ နှုတ်ဆက်နေသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အီကွေဒေါနိုင်ငံ သမ္မတ Lenin Moreno သည် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Manuel Mejia နှင့် အီကွေဒေါနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Chen Guoyou တို့နှင့်အတူ CoronaVac ကာကွယ်ဆေး ရောက်ရှိမှုကို ကြိုဆိုခဲ့သည်။
“ဒီကာကွယ်ဆေးတွေက ကျွန်တော်တို့ကို ယုံကြည်မှု ပေးစွမ်းပြီး မျှော်လင့်ချက်ကိုလည်း ဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်” ဟု Moreno က ကာကွယ်ဆေးရောက်ရှိမှုအပေါ် ဝမ်းမြောက်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အီကွေဒေါနိုင်ငံသည် လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံများတွင် COVID-19 ကပ်ရောဂါ အဆိုးဝါးဆုံးထိခိုက်ခဲ့သည့် နိုင်ငံများအနက် တစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ရောဂါကူးစက်ခံရသူ ၃၄၀,၀၀၀ ဦးရှိပြီး သေဆုံးသူ ၁၂,၁၅၈ ဦးရှိကြောင်း သိရသည်။
ကာကွယ်ဆေးရောက်ရှိလာခြင်းသည် အီကွေဒေါနိုင်ငံအတွက် အမျိုးသား ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းအစီအစဉ် ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရန် ကာကွယ်ဆေးပမာဏအမြောက်အမြား စတင်ရရှိလာခြင်းဖြစ်သဖြင့် “သမိုင်းဝင်နေ့တစ်နေ့” ဖြစ်ကြောင်း Mejia က ဆင်ဟွာသို့ ပြောခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးရဲ့ အစဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အင်မတန်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ ဒါက အမှန်တကယ် အရေးပါတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါ” ဟု Mejia က ပြောခဲ့သည်။ နှစ်နိုင်ငံကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဆက်ဆံရေးကြောင့် ကာကွယ်ဆေးရောက်ရှိလာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း Mejia က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
အီကွေဒေါနှင့် တရုတ် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး၊ ကူးစက်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်း ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းအတွက် အလွန်ထူးခြား၍ အရေးပါသောနေ့ဖြစ်ကြောင်း၊ ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားချိန်ကတည်းက နှစ်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များသည် အပြန်အလှန် စာများနှင့် သဝဏ်လွှာများ ပေးပို့ခဲ့ကာ တယ်လီဖုန်းဖြင့်လည်း ဆက်သွယ်ပြောကြားခဲ့ပြီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် တိုက်ဖျက်ရေး၌ အပြန်အလှန် ပံ့ပိုးမှုကို ဖော်ပြခဲ့ကြောင်း အီကွေဒေါနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Chen က ပြောခဲ့သည်။ (Xinhua)
Ambassador Chen said it wasavery special and important day in bilateral ties, anti-epidemic cooperation, and the nationwide vaccination drive, noting that since the outbreak of the pandemic, leaders of the two countries had sent each other letters and messages, and spoken by phone to show mutual support in the fight against the coronavirus. Enditem
1-Boxes containing the first batch of Chinese-developed Sinovac COVID-19 vaccines are seen at an airport in Quito, Ecuador on April 7, 2021. (Photo by Santiago Armas/Xinhua)
2-Ecuadorian President Lenin Moreno (2nd L) touches fists with Chinese Ambassador to Ecuador Chen Guoyou (2nd R) while attendingawelcome ceremony for the arrival of the first batch of Chinese-developed Sinovac COVID-19 vaccines at an airport in Quito, Ecuador on April 7, 2021. (Photo by Santiago Armas/Xinhua)